July 2020 - Page 2 of 3 - Puntland Mirror Believable Media Website
Raysulwasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax oo lagu aasay magaaladii uu ku dhashay ee Garoowe
July 16, 2020 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Raysulwasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax ayaa maanta oo Khamiis ah lagu aasay magaaladii uu ku dhashay ee Garoowe. Xasan Abshir Faarax ayaa Axadii ku geeriyooday dalka Turkiga halkaas uu muddo ku […]
July 14, 2020 Puntland Mirror 0
Beledweyne-(Puntland Mirror) Diyaarad ka diiwaangashan dalka Kenya ayaa ku burburtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne maanta oo Talaado ah. Ma jirto cid ku dhimatay balse waxaa jira ilaa saddex qof oo ku dhaawacmay, sida ay […]
July 13, 2020 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Taliyaha ciidanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ka badbaaday weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay gudaha Muqdisho maanta oo Isniin ah. Gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa oo uu waday qof ismiidaamiye ah ayaa […]
Madaxweynayaasha Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ah Madaxweynaha Dowladda Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye, Madaxweynaha Dowladda Hirshabelle Mudane Maxamed Cabdi Waare, Madaxweynaha Dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Deni, Madaxweynaha Dowladda Koonfur Galbeed […]
July 12, 2020 Puntland Mirror 0
Ankara-(Puntland Mirror) Raysulwasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Abshir Faarax ayaa maanta oo Axad ah ku geeriyooday dalka Turkiga, sida ay xaqiijiyeen qoyskiisu. Raysulwasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka tacsiiyeeyay geerida ku timid […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi ayaa xalay ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya, sida ay xaqiijiyeen qoyskiisu. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timid madaxweynihii hore, […]
July 11, 2020 Puntland Mirror 0
Dhuusamareeb-(Puntland Mirror) Shirka u dhaxeeya Madaxweynayaasha Dowladdaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Sabti ah si rasmi ah uga furmay magaalada Dhuusamareeb. Shirka ayaa waxaa ka qeybgalaya madaxweynayaasha Puntland, Galmudug, Jubbaland, Koonfur […]
July 9, 2020 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka digay muddo kororsi la xiriirta doorashooyinka soo socda. “Waa in doorashadu ay ku dhacdo waqtigii loogu tala galay, lagana fogaadaa in lagu shaqeeyo fikir […]
July 8, 2020 Puntland Mirror 0
Dhuusamareeb-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullahi Deni ayaa la filayaa in uu tago magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Cutubyo gaashaaman oo katirsan ciidanka ilaalada madaxtooyada Puntland ayaa maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb, kuwaasoo hordhac u […]
July 6, 2020 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynayaasha Dowladaha Xubnaha ka ah Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa Arbacada soo socota shir ku yeelan doona magaalada Dhuusamabareeb, sida lagu sheegay war-saxaafadeed wadajir ah oo ay soo saareen maanta oo Isniin ah. Madaxweynayaasha […]
Mid kamid ah hoggaamiyaasha ugu waa-weyn burcadbadeeda Soomaaliya oo ka badbaaday weerar gaadmo ah
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Mid kamid ah hoggaamiyaasha ugu waa-weyn ee burcadbadeeda Soomaaliya Maxamed Garfanje ayaa ka badbaaday weerar gaadmo ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo deegaanka ah. Weerarka ayaa Sabtidii ka dhacay meel u dhow degmo xeebeedka [...]